Ahoana no handresena ny faran'ny fifandraisana ▷ ➡️
Ahoana no handresena ny faran'ny fifandraisana. Mandresy ny faran'ny fiarahana tsy mora, indrindra raha tafasaraka amin'ny olona izay niarahanay niaina ny zavatra niainantsika sy ny fahatsapantsika hatry ny ela isika. Raha ny marina dia maro ny olona mankany amin'ny psikology noho io antony io. Na izany aza, misy teknika afaka manampy anao hanaintaina ny namanao mahazatra.
Tokony ho takatsika izany tsy ho etona mandritra ny alina ny fanaintainana. Tsy afaka manadino haingana olona iray izay nandaniantsika fotoana be dia be koa isika. Na izany aza, tsy maintsy manao izany isika tandremo fa tsy afaka miraikitra amin'izany toe-javatra izany isika, ary noho izany, tsy maintsy manao ny anjarantsika isika handroso.
Mba hianaranao miala amin'ny faran'ny fifandraisana, homena andian-dahatsoratra ianao soso-kevitra izany dia hahafahanao mivoaka tsikelikely amin'ity toe-javatra mampanaintaina ity. Na izany aza, araka ny efa noresahintsika tetsy ambony dia ilaina izany manaova ezaka ary manaova toe-tsaina tsara.
1 Ahoana ny fomba handresena ny fiafaran'ny fifandraisana tsikelikely
1.1 1. Ovao ny fomba fisainanao
1.2 2. Manaova hetsika
2 Torohevitra 6 handresena ny faran'ny fifandraisana
Ahoana ny fomba handresena ny fiafaran'ny fifandraisana tsikelikely
Para miala amin'ny faran'ny fifandraisana, mila mifantoka amin'ny lafin-javatra roa lehibe isika:
Ovay ny eritreritra
Ovay ny fomba fisainantsika, ary koa ny zavatra ataontsika, mitaky ezaka be, fa io ihany no fomba hiatrehana ny faran'ny fifandraisana.
Hazavainay eto ambany ny tsirairay amin'izy ireo.
1. Ovao ny fomba fisainanao
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika ny fiovana no fomba fisainantsika. Rehefa ratsy ny eritreritsika dia manimba antsika izy ireo fa tsy manampy antsika ary manitatra ny fanaintainantsika.
ny eritreritra ratsy dia miseho amin'ny fomba samihafa ahoana: Mieritreritra fa tsy hahita olon-kafa mihitsy izahay, fa ny zava-drehetra dia noho ianao, mahatsapa fa nandany fotoana na nahatsiaro ho voafitaka ianao, sns.
Ireo karazana eritreritra ireo dia fahita amin'ny ankamaroan'ny olona manapaka ny fifandraisan'izy ireo diso tanteraka izy ireo ary tsy misy ilana azy, satria tsy misy zavatra iainana mandany fotoana ary hisy olona vonona hihaona aminao foana ary fantatrao izy.
Fahita ihany koa ny mieritreritra fa tena manokana ny vadinao ka tsy hahita olona mitovy ianao. Na izany aza, eritreritra ratsy hafa io izay tsy misy ifandraisany amin'ny zava-misy. Misy olona an-tapitrisany ao el tontolo ary izy rehetra dia samy manokana. Ny hany ilainao dia sokafy ny sainao sy ny fonao hahatsapa izany.
Farany, mamporisika izany izahay aza manomboka fifandraisana aorian'ny famaranana ny hafasatria mila fotoana fanasitranana ny ratra sy fananganana anao indray. Ary fomba hafa, ny fanaintainana dia mety hiafara amin'ny vao maika lehibe kokoa.
2. Manaova hetsika
Raha nahatratra an'io hevitra io tamim-pahombiazana ianao ary afaka nanova ny fomba fisainanao, dia ilaina izany mandray andraikitra ary manomboka manangana. Manoro hevitra anao izahay hametraka ireto fanontaniana manaraka ireto ho an'ity:
Inona no kasainao hatao manomboka izao?
Inona no tianao hatao amin'ny hoavinao?
Ahoana no ahatsiarovanao ny tenanao amin'ity toe-javatra ity? Te hijanona eo am-pandriana mitomany ve ianao sa tianao kokoa ny mivoaka sy mankafy ny tenanao?
Araka ny nolazain'i Albert Einstein: «Eo afovoan'ny fahasahiranana no mipetraka ny fotoana«. Midika izany fa Tokony hoheverinao ny fotoana nanararaotanao nisaraka tamin'ny vadinao. Raha tsy mandeha lavitra ianao dia mety manana fotoana malalaka bebe kokoa, midika izany fa afaka manao izany ianao manao zavatra tianao, fa tsy nahita fotoana mihitsy ianao. Noho izany, tonga ny fotoana hametrahanao fanamby vaovao, hanatanterahana tetik'asa izay tsy vitanao, hihaona amin'ny olona vaovao, handany fotoana bebe kokoa amin'ny fianakavianao sy ny namanao, manao fanatanjahan-tena, misakafo salama, mamakia bebe kokoa na mitsangatsangana.
Tadidio izany tsy io fifandraisana io ihany no hanananao eo amin'ny fiainanao. Noho izany, manolo-kevitra izahay, ambonin'izany rehetra izany, ny hahatakaranao an'io fiatoana io amin'ny traikefa iray hianaranao hanatsara ny fifandraisanao amin'ny ho avy.
Nanazava ny ifotony izahay mba hanombohanao mahatsapa inona no tokony hataonao raha te handresy ny faran'ny fiarahana ianao. Ankehitriny dia homenay ianao Toro-hevitra 6 hanampy anao ho tonga any.
Torohevitra 6 handresena ny faran'ny fifandraisana
Torohevitra handresena ny faran'ny fifandraisana
Aza afenina izay tsapanao. Ny fiheverana fa tsy maninona ianao rehefa tsy afaka dia mety hanimba be.
Jereo indray ny tenanao. Matetika izahay dia tsy manao hetsika tianay satria tsy mifanaraka amin'ny sakaizanao izany, noho izany, avelao ny tenanao hanao hetsika vaovao ary haka ireo zavatra nataonao talohan'ny fifandraisanareo.
Eritrereto ary alamino ny hoavinao. Atombohy amin'ny tanjona sy asa tsotra indrindra ary avy eo mandroso amin'ireo zava-dehibe indrindra.
Karakarao tsara ny tenanao. Matetika ny olona iray dia tsy mitandrina ny tenanao rehefa mandalo ny faran'ny fifandraisana izy ireo. Na izany aza, rehefa mitandrina ny tenanao ianao dia hitombo ny fahatokisanao.
Mifanerasera amin'ny olona vaovao.
Makà fanampiana avy amin'ny namana sy fianakaviana.
Raha ilaina, matokia ny fanohanan'ny matihanina.
Izany no izy! Manantena izahay fa momba an'ity lahatsoratra ity ny fomba handresena ny faran'ny fifandraisana efa nahasoa anao. Raha mifanohitra amin'izany no ao anaty fotoana tsara ianao ary te hihaona amina olona manokana, dia mamporisika anao izahay hamaky ny fomba handresena vehivavy sarotra. Mandra-pahatongan'ny manaraka!